घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू घानियन फुटबल खेलाडीहरू थमस पार्टे बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियस को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; “सेनेगल". हाम्रो थोमस पार्टी लाई बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाताको मिति सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्नका साथै समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक ठोस, शक्तिशाली र छिटो घुमाउरो रक्षात्मक मिडफिल्डर हो लक्ष्यको लागि आँखाको साथ। जबकि, थोरैस पार्टेको जीवनी मात्र केहि थोरैले विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- बाल्यकाल
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम थमस टाई पार्टी हो। थमस पार्टे को रूप मा उनको प्रायः बुलाया जान्छ 13th जून 1993 को उनको आमा र एक समान एक पिता को ओडुमेज कोरोबो शहर, घाना मा जन्मेको थियो। तल उनको प्यारा आमाबाबु को एक तस्वीर हो जसको नाम लेखन को समयमा अज्ञात रहन्छ।
थोमा पार्टेका अभिभावक इन्स्टाग्राममा क्रेडिट।
थोमस एक गरीब तर नम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि बाट मेल खान्छ। उनको पिता एक स्थानीय फुटबल कोच थिए, जबकि उनको मां को एक छोटा व्यापारी थियो। उनको आमा र बुबाको साथ, तिनीहरू आफ्नो पार्टे परिवारमा आठवटा संख्या हुन् र थमस सबैभन्दा पुरानो बच्चा हो।
सिटीफोमलाइनका अनुसार उनका बुबाले उनको बुबासँग भेट गर्नु अघि उनका तीन जना बच्चा थिए। चाँडै, थोमस आफ्ना भाइसँगै, फ्रान्कले उनीहरूको बुवासँग गुणस्तरीय समय बिताए जो ओडुमासे क्रोबो शहरको आफ्नै घानियन स्थानीय टोलीमा फुटबल प्रेमी र प्रशिक्षक थिए।
उनीहरूको बुवाको रूपमा फुटबल प्रेम गर्ने कोच भएको हुँदा, खेलको प्रेम सानो थमस र उनका भाइ फ्रान्सेजमा राख्नु स्वाभाविक हो। दुबै आफ्नो बुबाको स्थानीय टोलीको मुख्य पहिचान थिए।
थोमा पार्टे (बाँया) सँगै आफ्नो भाइ, फ्रान्सिस (दायाँ) संग। इन्स्टाग्राममा क्रेडिट।
दुबै भाइहरूका लागि उनीहरूको प्रोफेशनल हुने महत्वकांक्षा केवल बितेको कल्पना मात्र थिएन। प्रारम्भमा, फुटबल एक सुनौलो रूखको रूपमा देखा पर्‍यो र परिवारको गरीबी अन्त्य गर्न सान्त्वनाको आशा।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
थोमसले तिनको हदसम्म कठोरता चलाए फुटबल प्रशिक्षणको लागि आफ्नो शिक्षा सम्झौता र उनको पछि लाग्ने फुटबल सपनाहरू
थोमाले अशेमानमा सर्नु भन्दा पहिले १० बर्षको उमेर सम्म उनका बुवाको प्रशिक्षण आधार (क्रोबो) मा फुटबल खेल्न शुरू गरे। टिमका लागि खेल्दा, उनका बुबाले उसलाई उपनाम दिए "सेनेगल"। यो थियो किनकी उनको छोराले उनलाई एक जना नामको मित्रको सम्झना गरे।
थमस विकासको लागि निरन्तर रूपमा, उनले यूरोपमा यात्रा गर्ने सपना नर्स गर्न पैसा तिर्न थाले ताकि उनी आफ्नो परिवारको हेरचाह गर्न सक्थे। यस्तो हताशाले थोमसलाई प्रायोजक खोज्न र फुटबल परीक्षणमा भाग लिन खोज्यो।
थोमा पार्टेका आमाबुबाको अवसर आएको खण्डमा उनका छोराको युरोप यात्राका लागि पैसा जुटाउने धेरै असफल प्रयासहरू थिए। यो उनको बुबाले आफ्नो सम्पत्ति बेच्ने निर्णयमा आइपुगेको छ।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि
थमसलाई उनको स्पेनमा जाने मौका थियो जब उनी एक एजेन्सीले देखाए जसले फुटबल प्रतियोगितामा उभिएका देखे। यद्यपि त्यहाँ कसैलाई भन्दा राम्रो थियो, त्यो अग्रगामी जसले सबै ज्ञात म्याचमा सबै गोल गरे। सर्वोत्तम खेलाडीको बावजूद, उनले खुसीसाथ यूरोपको भ्रमण गर्न एक प्रस्तावलाई इन्कार गरे र उनीहरूलाई घानामा रहन आग्रह गरे बरु ठूलो क्लबको लागि खेल्न चाहन्छ। थमसको अनुसार,
"जब एजेन्टले मलाई के चाहियो भनेर सोध्यो भने, मैले भनें .. युरोपको फुटबलमा मेरो परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउन।"
थोमा र एजेन्ट दुबै सहमत थिए कि उनी स्पेन जानेछन्। यद्यपि कुनै स्पेनी टोलीलाई छलफल गरिएको थिएन किनकि यो एक अचम्मको प्याकेज थियो। थोमाको एजेन्टले उसको सबै कागजातहरू प्रशोधन गर्‍यो जबकि उनीसँग तालिम, खान, सुत्न र त्यो यात्राको त्यो दिनको लागि पर्खनु बाहेक अरू केहि गर्नुपर्दैन।
त्यस आशिष् दिन, थमस र तिनका एजेन्टले कारमा पार्यो, घानाको राजधानी अक्करा गए जहाँ उनको पासपोर्ट दिइएको थियो। शोक गरेर, उनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो त्यो दिन उनको पिता बिना वा उनको परिवारको कुनै सदस्यले बताए। थमसको अनुसार;
"मेरो बुवालाई सचेत थिएन, मेरो परिवारका कसैलाई केहि पनि थाहा थिएन, न त म त्यो दिन जाँदैछु, किनकि यदि उनीहरूलाई भनियो भने यसले धेरै त्रास निम्त्याउँछ।"
थमस अन्तमा स्पेन, आफ्ना पिता, आमा, भाइ बहिनी, बहिनीहरू, चाडपर्चीहरू र चाचीहरूको ज्ञान बिना स्पेन गए। नजिक पुग्दा, उनी एथलेटिको म्याड्रिडसँग खेल्न थालिन्। उनी स्पेनमा पहिलो दिन बोल्दै थॉमसलाई भने citifmonline...
"पहिलो दिन धेरै चिसो मलाई विश्वास थियो र हामी मानौं हामी त्यहाँ pm:०० तिर पुगेका थियौं र साँझ 5:०० तिर तालिम लिएका थियौं। तर मैले यो पक्का गरे कि मैले राम्रो गरें। ”
थमस बीले टोलीमा पुग्न करिब एक महिनाको लागि एटलेटिको म्याड्रिड सीको लागि खेलेका थिए जहाँ उनले ओलिभर टोरेसलाई भेट्टाए शाऊल निग्युज। बी टीममा, उहाँ डिएगो सिमोन द्वारा चिनिनुभयो र दुबैले एक अर्कासँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरे। थोमा त्यो राम्रो थियो किनकी, उसलाई कहिलेकाँही बिग बॉस द्वारा पहिलो टीम संग प्रशिक्षणको लागि आमन्त्रित गरियो।
महिनाको लागि परिवारलाई थाहा छैन:
तपाईंलाई थाँहा थियो?… कसैलाई थाँहा पाउनु भन्दा पहिले months महिना लाग्यो, थोमा घानामा थिएनन्। पार्टेले भने कि उनका अभिभावकहरूले उनको निर्णयलाई स्वीकार गरे जब उनीहरूले अन्तमा थाहा पाए। त्यस बारेमा बोल्दै, उनले एक पटक भने ...
“मेरो बुबा सधैं मेरो निर्णयहरूसँग ठीक हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँ पहिले नै आफ्नो घर बेचेर मेरो निम्ति पैसा कमाउनुभएको थियो। यो उसलाई धेरै खर्च भयो। स्पेनमा मेरो दोस्रो महिना बसेपछि उनले मलाई जूता किन्न र मेरो हेरचाहको लागि पैसा पठाइदिए। ”
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
Dएटलेटिको मैड्रिड एकेडेमीमा बी.ए. बाट उनको वेभफ्रेशन्स र आत्म-विश्वास थियो। उनी एक वरिष्ठ खेलाडी बनेकी थिईन्, जहाँ उनी अझै पनि प्रभावित भएकी छिन्। डिएगो सिमीन उहाँलाई वरिष्ठ टोली पानामा छिट्टै प्राप्त गर्न।
थॉमस Partey ण मा।
मल्कोका र अल्मेरियामा उनको ऋण साधनमा प्रभाव पारेपछि थॉमसले कलब्याक पाएको थियो र एथलेटिको मैड्रिड वरिष्ठ टोलीमा एकीकृत भएको थियो। डिएगो सिमीन। एथलेटिको म्याड्रिड टोलीसँग, उनले यूईएफए युरोपपा लीग र यूईएफए सुपर कप जित्न सफल भए।
थॉमस Partey फेम कथा मा उठ्न। इन्स्टाग्राममा क्रेडिट।
लेखनको समयमा, थमसले अफ्रिकामा फुटबल फ्यानहरूलाई साबित गरेको छ कि उनी पछि उनको गायन पीढीको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञा हो माइकल एसेनन। बाक्लो, जुन तिनीहरू भन्नुहुन्छ इतिहास हो।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
सफल अफ्रिकी फुटबलरको पछाडि, त्यहाँ रहेको ग्लैमरस प्रेमिका रहेको चित्रको नाम ओहेमा हो।
थॉमस Partey प्रेमिका। नाडीमा क्रेडिट।
थोमा, घानामा उनको स्थानीय क्लबको लागि खेल्दै थमसले आफ्नो प्यारी प्रेमिकालाई भेट्टाए। जस्तै नेल्सन सेमेडो, थमसले डेटिङ र उनको प्रेम जीवनको आउँदा आफ्नो अफ्रिकी पारिवारिक जडको साथ रहन निर्णय गरेको छ।
गायन मिडियाफिल्डर एक पटक उनको Instagram पृष्ठ मा एक तेज तस्वीर साझा भएको छ जहाँ उनको पुरा तरिकाले सजिलै संग माल्टा मा आफ्नो केटी संग एक छुट्टियों को छुट्टी को आनंद ले।
थमस पार्टीले गर्लफ्रेंडको साथ छुट क्रेडिट GhanaWeb.
कुनै श doubt्का बिना, ओहीमा एक तेजस्वी महिला हुन् जसले धेरै भन्दा धेरै आफ्नो प्रेमीको मन जितेका छन् र यो उनीहरूको विवाह हुनु अघि समयको कुरा मात्र हो।
यद्यपि, छोटो शक्तिको बारेमा जान्दछ। तर उनको सामाजिक सञ्जाल विवरणहरू मध्ये एकले उनीहरूले मोन्ट्रियलको उत्सव ईकोले डि विज्ञान साइज डी लाभेसनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायको अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यसमा एक विशेषज्ञ व्यवस्थापन विद्यालय Québec, क्यानाडा।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
थॉमस Partey व्यक्तिगत जीवन चिन्न तपाईं उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरूबाट, उनी एक अफ्रीकी फुटबलर हुन् जसको सामाजिक र मानवीय अन्तस्करण छ। जस्तै Ngolo Kante, थोमस कुनै एक दयालु हृदय हो जसले विश्वास गर्दछ कि यो आफ्नो सँगी युवाहरु घर जवान फिर्ता लिन को लागी आवश्यक छ।
थॉमस Partey निजी जीवन। इन्स्टाग्राममा क्रेडिट।
थमस एक खेलाडी हो जसले आफ्नो जग्गा (लेखनको समयको रूपमा) छैन, तर उसले आवश्यक हुन सक्दोरहेछ जब उनीहरूलाई रोक्न सक्दैन। जब यो सामाजिक जिम्मेवारीको क्षेत्रमा आउँछ, घाना मानव अधिकारको प्रतिबद्धतामा संलग्न परिवारका सदस्यहरूको सहयोगमा आफूलाई माया गर्छ।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
थोमा पार्टेको परिवारको कथा जुन गरीबीबाट धनीको वृद्धिलाई जनाउँछ। कुनै श doubt्का बिना, ऊ शुरुआत र परिवारको मूलको सबैभन्दा नम्र देखिन्छ। उनको परिवारको बलिदानले घाना र अफ्रिकाको बाँकी भागहरूमा डष्ट भएका धेरै धुलोपार्कमा ना bare्गो खुट्टामा तालिम दिने र खेल्ने थुप्रैलाई प्रेरणा दिएको छ।
थोमा पार्टेको बुबाको बारेमा: तापनि थॉमस एक गरीब परिवारबाट आएका थिए, तिनको बुबा तल चित्रण गर्न निश्चित भयो कि उनको घर सधैँ केहि खाने को लागी थियो।
थॉमस Partey बुबा। क्रेडिट Citifmonline.
थोमसका बुवाले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेका फाउंडेशन फुटबल कोच मात्र हुन्। यो केवल एक अद्भुत बुबा हो जसले आफ्नो सम्पत्ति बेच्नेछ आफ्नो छोराको सफलता सुनिश्चित गर्न।
थॉमस पार्टेको आमाको बारेमा: थोमस पार्टेकी आमा एक सानो व्यापारी हुन् जसले आफ्नो छोराको धनको बावजुद अझै पनि उनको प्रावधान पसल व्यवसायमा संलग्न छन्। यसले Partey परिवारका सदस्यहरू कति नम्र र तल पृथ्वीमा छन् वर्णन गर्दछ।
थोमा पार्टेको परिवारको बारेमा तथ्यहरू- उहाँकी आमा। इन्स्टाग्राममा क्रेडिट।
थोमा आमा पनि त्यस्तै व्यक्तिहरू हुन् जसले सम्भवतः उनको छोराको डरले स्पेन जान रोक्न सक्थे। यद्यपि, उनको छोरामा डर पैदा गर्ने उनको प्रयासलाई मात्र बुझ्न सकिन्छ किनकि उनी एक मायालु र मायालु आमा हुन्। थोमाका अनुसार…
“कहिलेकाहीं मैले मेरो आमाको कुरा सुन्थे र कहिलेकाहीं म गर्दिनँ। म जहिले पनि मेरो लागि राम्रो लाग्ने गर्छन र यही कारणले मैले कसैलाई केही नभए यात्रा गर्ने निर्णय गरें। ”
यद्यपि उनको डरले तिनलाई अझ राम्रो बनायो, तर मामा थमसले आफ्नो छोरालाई वास्तवमा सुअवसर गरेको अनुभव गरे। तुरुन्तै, आमा र छोरो बीचको बलियो बन्धन अवस्थित छ।
थोमा पार्टेका भाई बहिनीहरूको बारेमा: घानको रिपोर्टअनुसार, थमस 8 बच्चाहरूको परिवारमा पहिलो बच्चाको रूपमा जन्मिएको थियो। F को बाहेक उनको भाइबहिनीको बारेमा थाहा छरैंसी जसले पनि आफ्नो भाइसँग एकदमै फुटबल व्यापारमा बसाए।
थॉमस Partey भाई- फ्रान्सिस Narh। लेवस्की सोफिया र sportsnewsgh लाई क्रेडिट।
लेख्ने समयमा, फ्रान्सेज हाल साइप्रियोट फुटबल टीम डोक्सा काटोकोपियाका लागि खेल्छन्। फुटबलि the पार्टेको परिवारका पुरुषहरूमा आराम गर्दैन। थॉमस पार्टेई बहिनीहरू पनि फुटबल खेल्छन् तर उच्च स्तर होइन। सोकर वास्तवमै पारिवारिक व्यवसाय भएको छ।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- LifeStyle
£ 45.00m को बजार मूल्य को बावजूद (मार्केट रिपोर्ट ट्रान्सफर गर्नुहोस्), थॉमस फुटबलरको प्रकार होइन जो जीवन शैलीमा रहन्छ जो एक मुट्ठीभर धेरै प्रभावशाली कारहरू, बोज, swagger र केटीहरू द्वारा सजिलै देख्न सकिन्छ। तलको फोटोमा अवलोकन गरिए झैं, प्रसिद्दको साथ व्यवहार गर्ने उसको क्षमता सीधा समानुपातिक छ ऊ फुटबल बललाई सम्हाल्ने तरीकासँग।
थॉमस Partey LifeStyle।
थमस पार्टीले पिचबाट कम ग्लैमरस, हास्यास्पद र निचो-मध्य मध्यम जीवन बिताउँछ। उहाँ आफ्नो पैसा व्यवस्थापन गर्न चासो हुनुहुन्छ। यो पागलपन जस्तो बिताउँदैन, वा आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन गर्दैन।
थॉमस Partey कम ग्लैमरस जीवन बिताउँछ। इन्स्टाग्राममा क्रेडिट।
थमस पार्टि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
थमस पार्टीले लामो समयसम्म अन्य अनौठो फुटबल क्यारियरको उत्कृष्ट किस्ता कि केहि अनुचित मूल्य पाएको छ। केहि प्रशंसकहरु लाई उनको क्लासिक मोहको केश को अजीब र विद्रोही मानिन्छ।
थोमा पार्टेको कपाल स्टाइल तथ्यहरू। इन्स्टाग्राममा क्रेडिट।
कार दुर्घटनाको नजिक:
खेलकुदका अनुसार एटलेटिको म्याड्रिडका प्रत्येक खेलाडीलाई हुंडै कार दिइयो जुन उनीहरूले संकलन गर्नु अघि परीक्षण गरेका थिए। यद्यपि थोमा पार्टेको परीक्षण केस फरक थियो। सुरुमा, आफ्नो सुरु गर्न सकेन। जब उनले अन्तमा गरे, उनी लापरवाह ड्राइभिंगमा अन्त भयो, लगभग कार होडिंग विज्ञापन होर्डिंगमा। यसले उनको साथीहरूलाई हिस्ट्रीमा छोडिदियो। लाई भिडियो क्रेडिट Diario AS.
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो थामस पार्टानी बालपालिका स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
परिमार्जित मिति: जनवरी ,०, २०१ 20